Star Attractions To mitsidika ny Vatican City | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Star Attractions To mitsidika ny Vatican City
Star Attractions To mitsidika ny Vatican City
(Last Nohavaozina: 29/12/2019)
Raha mipetraka any Eoropa ary ianao efa nahazo faran'ny herinandro mba hiantra (na iray manontolo herinandro!), milaza “Eny” ny fitsidihana ny Vatican City alalan'ny lalamby sy mankafy azy eo feno hafainganam-pandeha!
Mikasa ny fitsidihana ny Vatican City?
Koa satria 1929 ny Vatican no tsy miankina sy ny fanjakana ny iray kely indrindra eto amin'izao tontolo izao. Na izany aza, fa nihena na oviana na oviana ny voninahiny, hatsaran-tarehy, ary ny ara-kolontsaina sy manentana ny fanahy izaitsizy ara-tantara heviny. Na dia naharitra ny marina 0.44 kilometatra toradroa, Vatican ny nahazo manintona be mba hitandrina mpizaha tany be atao: avy any St. Petera Basilica amin'ny Lasapelin'i Sixtine (ary ny zavatra hafa rehetra ao anelanelan'ny), ianao tia faharoa rehetra lany ao amin'ny Vatican.
Raha ny fitsidihana ny Vatican City tamin'ny alalan'ny lalamby mandeha, misy ankehitriny herinaratra fiaran-dalamby azo Vatican rehetra mpankafy. Ny fiaran-dalamby dia mampifandray Vatican City gara with the Pontifical Villas.
Ireto misy vitsivitsy manintona kintana ao amin'ny Vatican no te-hitsidika sy hahazo indrindra ny Italia traikefa.
Ny asa lehibe St. Basilica Petera no ivon'ny ny Vatican, miorina amin'ny zavatra heverina ho aiza St. Peter fasana.
St. Petera Basilica dia saika ny isan'ny mpanakanto malaza 'asa. Tena hatahotra-manaitra, ny kanto in St. I petera&#8217;s Basilica manomboka eo anatrehanao miditra amin ' ny fiangonana. Aloha ianao mahita ny sarivongan'i Bernini Constantin miaraka ny sisa tsy ny Lalàn'i Mosesy Giotto ambonin'ny varavarana lehibe. Izy ireo fahasoavana ny lavarangana fidirana, ary ny 185m 46m ny lavany, ary lava nave miakatra ny dome 119 metatra ambony! mazava ho, misy ihany koa ny malaza Michelangelo Pietà fa dia tsy hino ny masonao! Jereo ny hanome fitahiana lehibe ho voaravaka Chapel avy amin'ny Fanasan'ny Tompo, Ny tsara tarehy Bernini Santionan'izany fiangaly varahina Baldacchino, ny Papa alitara sy ny sisa maro hafa.
Rimini ho any Roma Lamasinina
Verona ho any Roma Lamasinina
Mahatalanjona ao amin'ny marina ny azy, ny Lasapelin'i Sixtine dia toerana iray hafa ianao mba hahitana raha hahazo anao dia mamaly ny Vatican City tamin'ny alalan'ny lalamby. Naorin'i Papa Sixtus IV in 1473-84 ary indray avy 1980 ny 1994, Lasapelin'i Sixtine mihazona sary hoso-doko maro mpanakanto. Anarana ve Michelangelo, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, ary Signorelli hoe na inona na inona? tsara, dia nanampy hanao ny mandan 'ny Lasapelin'i Sixtine ny tampon'isa ny Renaissance hoso-doko. Ny Fitsaràna farany Michelangelo voaloko ao amin'ny Chapel dia heverina ny tena mampivarahontsana sy zava-bita lehibe indrindra ny Eoropa kanto.
Lasapelin'i Sixtine no toerana ny conclave mba hifidy ny Papa no natao. Daily, an-jatony mpizaha tany midera azy, ary - ianao dia mety ho ny anankiray ho azy ireo, koa!
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny fitsidihana ny Vatican City ny fiarandalamby dia fa mamela anao hahita virtoaly rehetra manan-danja ao amin'ny Vatican zava.
Vatican Museums fandaharana manasongadina ny maneho amin'ny fomba natao tamin'ny Papa Clement XIV sy Pie VI avy 1769 ny 1799. Ireo lalan- dia harena sarobidy-sarobidy ny farantsa sy ny manan-danja vitsivitsy manasongadina dia tena sarotra! Ny tsirairay dia manana zavatra tsy manam-paharoa ny hanaterana:
Sala ny Croce Greca Hampamoahin'i hanome fitahiana lehibe ho voaravaka mena porphyry sarcophagi Constantin ny zanakavavin'i, Constantia, ary ny reniny
Sala delle Muse Belvedere mampiseho tratra, tamin'ny taonjato voalohany-Michel-Ange-higagana BC asa Apolloniosa ny Athens
Gabinetto delle Maschere be voninahitra dia manana rihana ny Lalàn'i Mosesy tsehatra saron-tava avy ao amin'ny Villa Adriana in Tivoli
Cortile do Belvedere mihazona ny Apollo Belvedere, iray amin'ireo sarivongana malaza indrindra ao amin'ny Vatican
Galleria delle Statue dia manasongadina ny tsara indrindra candelabras fahiny – ny Barberini Candelabra – koa avy any amin'ny Villa Adriana amin'ny Tivoli
Siena ho any Roma Lamasinina
Lucca ho any Roma Lamasinina
Papa fahavaratra-ponenana, The Pontifical Villas – Barberini Gardens no misokatra ho an'ny daholobe satria March 2014. Ny fidirana dia karazan-sarotra hita araka ny tsy signposted. Ny zaridaina ity dia eny amin'ny toerana mahafinaritra 2000 taona, maniry ny ambaratonga telo. Mahatalanjona izy ireo sady tsara niainga, ary ny farany dia mampiseho sehatra isan-karazany ny tombo-kase ny papa boxed amin'ny sisim-boly.
Mba tia anao mandeha rehefa nitsidika ny Vatican City tamin'ny alalan'ny lalamby, Search your origin and pick Rome on Mamonjy Train tranonkala ny boky iray fiaran-dalamby tapakila ao anatin'ny minitra ary manomboka ny Vatikana fientanam-po ianao taloha kokoa Te andrasana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/visiting-vatican-rail/- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha toa ianao manana vohikala, dia afaka mifandray amin'ny ny Vonjeo A Train RSS Feed.
5 Tips Fa mpitety By Train In Eoropa